Egypt na ụmụ | Akụkọ Njem
Egypt na umuaka
Mariela Carril | | Egypt, Iso umuaka eme njem
Ọ ga - ekwe omume iso ụmụntakịrị gaa akụkụ ọ bụla nke ụwa? Ọ nwere ike ịbụ, enwere ezinụlọ dị egwu, mana enwekwara ezinụlọ ndị na-anaghị achọ ihe egwu. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ọmarịcha ebe ụmụaka ọ bụla ga-atọ ụtọ… Dịka ọmụmaatụ, Egypt. Na-amaja ime soro ụmụ gị gaa Ijipt?
Mgbe m dị afọ 10, ahụrụ m pyramid na mkpọmkpọ ebe nke ụlọ nsọ n'anya. Echere m nrọ banyere ha, agụrụ m ihe niile m nwere ike ime banyere mba Africa ahụ ma atụ m nrọ ịbụ onye ọkà mmụta ihe ochie. Yabụ, ọtụtụ ụmụaka hụrụ Ijipt n'anya ma ee, enwere ndị mmadụ na-eji ụmụaka eme njem gaa Ijipt. Ka anyị hụ otú, mgbe na n'ụzọ.
1 Egypt na umuaka
2 Ihe ịga leta ụmụ Egypt
Ajuju mbu ndi n’abia n’uche mgbe anyi chetara Egypt na umu aka nwere ebe anyi ga akwusi, ma oburu n’anyị nwere ike iji obi oma gharia, ihe agaghi agha, ikuku kachasi nma, akwukwo, ogwu ...
Iji bido ị ga-ahọrọ ụbọchị na ndị njem kwetara na oge kachasị mma iji gaa bụ n’etiti Ọktoba na Eprel. Ke October ihu igwe ka ọkụ ma ọ bụghị ihe karịrị ọtụtụ mba, mgbe Disemba na Jenụwarị bụ ọnwa kachasị njem nleta ma e nwere ọtụtụ mmadụ nke na enweghị ntụsara ahụ. Oge ọkọchị bụ sọsọ, ọkachasị n’etiti Ọgọstụ, yabụ zere ya.
Travelga Ijipt n'ozuzu achọrọ visa na paspọtụ ziri ezi nke ị ga-enyocha etu nkwekọrịta gị na obodo gị si dị. Enwere visa a na-ahazi n'ọdụ ụgbọ elu na n'ozuzu maka ọtụtụ mba Europe ọ na-ewe ụbọchị 30 ma kwụọ ụgwọ na ego, ma kpachara anya, n'otu aka ụlọ ọrụ a na-emeghe naanị mba ụfọdụ, na nke ọzọ, ọ bụrụ na ị abata site na ala ma ọ bụ n'oké osimiri a ga-ahazi visa ahụ tupu oge eruo.
Ekwu okwu nke ego Egypt bu ibu obodo ndi njem nleta kaadị akwụmụgwọ nabatara ebe niile, ma ka, echefula inwe liras ndị Ijipt n'aka n'ihi na ịkwesighi ịtụkwasị onwe gị obi. Ugbu a, anyị na-echekwa ma Egypt bụ mba dị nchebe ịga njem ma ọ bụ ọ bụrụ nne nwere ike ịkwaga naanị ya na ụmụaka. Ọ bụ mba Alakụba ma enwere m ndị enyi na-enwetụbeghị ezigbo oge, ya na di ha n'akụkụ ha.
Ma enwere ahụmahụ na ahụmịhe ya enweghi oke ogwu (karịsịa n'ihe metụtara uwe, ya bụ, kpuchie ụkwụ, ubu, ọ dịghị ihe na-emesapụ aka). Ma nke ahụ bụ Egyptfo a wɔatwa wɔn ho ahyia no sɔre tiaa no karịa mba ndị ọzọ dị n'Ebe Ugwu Africa.
Kwesighi ịtụ anya nnukwu nchekwa na njem, eriri oche, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ oche ụmụaka. Ọ dịkwa mma ka inwee kpachara anya na nri ebe ọ bụ na enweghị ọcha dị ka mba ndị ọzọ. Y’oburu n’achoghi ka umuaka noo na oria osisia ma obu itu nsi, kpachara anya na ya.
Nke a gbasara nlekọta ma ọ bụ ntụle, mana n'eziokwu enwere ọrụ maka gị, nke a, ma nke ọzọ maka ụmụaka. Ihe m chọrọ ikwu bụ A na-atụ aro ka ụmụntakịrị mụta banyere Egypt tupu ha agaa mba ahụ: ọgụgụ, akwụkwọ akụkọ, ọbụna katuunu. Ọbụna ịga na ụlọ ngosi ihe nka na mba gị nke nwere akụ ndị Ijipt ka a na-atụ aro ya. Ikwesiri ikpali mmasi ma nye ha ihe omuma ka ha, n’agbanyeghi oke ike ha, ha puru ime ya kọwaa nleta ọbịbịa.
Ihe ịga leta ụmụ Egypt
Anyị nwere ike ịmalite site na ikwu maka mpaghara: Cairo, Valle del Niño nke dị n’ebe ndịda, Ọzara n’ebe ọdịda anyanwụ, tinyere ụsọ Oké Osimiri Uhie. Onye ọ bụla na-enye nke ya na mgbe ya na ụmụaka na-eme njem, echiche ahụ bụ -eme ka a mix ka ọ ghara iri nye umuaka nwere otutu akuko, otutu ulo ngosi ihe mgbe ochie, omenaala. Anyị nwere ike ime ka nwatakịrị chọọ ịmata ihe na-agụ ya agụụ ma mee ka ọ na-ekpori ndụ.
Na ndagwurugwu Naịl e nwere ụlọ nsọ ma n walksjeghari n’osimiri, n’ọzara uku na ọla-edo dunes na kamel na-agba ịnyịnya, na oke osimiri Oké Osimiri Uhie nhọrọ ndị ahụ gafere na ọdụ ụgbọ mmiri. N'ebe a, ị ga-eso ndị nkuzi edebanyere aha, lelee ihe mkpuchi mkpuchi na ihe anaghị, nwee ọtụtụ sunscreen na aka ma ịghara ịga mmiri n'ime awa ole na ole ị rutere n'Ijipt.
N'ọzara bụ Siwa oasis, ebe zuru oke maka umuaka, ya na ihe ochie ochie nke whale nke apuru ihu n’ime Wadi Al Hittan ma ọ bụ kamel na-agba ịnyịnya site n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Luxor. Cheedị echiche ụmụntakịrị unu ime ihe a niile.
Ọfọn, chee ka ha na-agagharị na Akwa Pyramid, n'ime ma ọ bụrụ na ịnweghị claustrophobic, na-agagharị n'ụlọ nzukọ nke ebube Muselọ ihe ngosi nka Egypt jiri akụ ya niile ma ọ bụ ịhụ mummies nke Mummification Museum, ihe na-enweghị mgbagha ọ bụla ha agaghị echezọ. N'ezie, mgbe ị gara pyramid ọ kachasị mma ịga otu ìgwè yana yana onye ndu Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa, ọ karịrị akarị, na ị nwere ike nwee ụjọ na-achịkwa ụmụaka ma na-anwa ịkwụ ụgwọ ọ bụla nye onye ọ bụla rịọrọ gị ego. Nile n'otu oge.
Ga njem nlegharị anya na-eme ka ị mata na ha nwere ike ịhazi foto gị ma ọ bụ ịnyịnya ibu kamel. Ee, ị na-akwụ ụgwọ maka ihe niile, mana ị na-akwụ ụgwọ na echegbula onwe gị banyere haggling. Na ụgbọ elu ikuku na-ekpo ọkụ Ha bụ usoro ụbọchị ị gara ileta Luxor. Ha dịkwa mma? Kedu ihe m maara! Ndị ọgọ m emeela ya n’afọ gara aga, otu enyi afọ ole na ole gara aga ... mana ọ bụkwa eziokwu na ọ dịbeghị anya otu dara, kedu okwute ... Ọ dabere na gị.
I nwekwara ike ịgbakwunye ha na a nọkwasi felucca, ụgbọ mmiri Naịl, nke nwere ike ịnweta na Cairo, Luxor ma ọ bụ Aswan, nke ka mma n'ehihie, mgbe anyanwụ dara; ma ọ bụ ụgbọ akwụkwọ klas mbụ na Tanta ma ọ bụ tram na Alexandria. N'elu Oké Osimiri Uhie ezinụlọ ahụ dum nwere ike ịga ije, snorkel, gaa ụgbọ mmiri ma ọ bụ mata Suez Canal site na Port Said wee hụ ndị buru ibu, ndị buru ibu, ndị na-ebu ibu na-agafe ya.
Enwere ike ime mmemme niile a nwayọ nwayọ na ụmụaka ma dịka ị si hụ, anaghị m ekwu maka ebe dị iche iche ma ọ bụ ogige ntụrụndụ ma ọ bụ ebe ịzụ ahịa. Dịka ị pụrụ ịhụ, njem gị na ụmụ gị gaa Ijipt bụ ihe ọzọ. Ọ bụghị Disney, ọ dị iche. N'ikpeazụ, ajụjụ banyere ma Ọ dị mma ma ọ bụ na ịghara iso ụmụaka gaa Egypt? atọ ihe azịza: ee, mba, ọ dabere. Ọ bụ eziokwu na enwere mwakpo ndị na-eyi ọha egwu, ee, na Disemba nke afọ gara aga, ogbunigwe gbawara na ụzọ njem nleta na-ewu ewu, dịka ọmụmaatụ, mana ndị mmadụ na-abịa ma na-aga oge niile, yabụ echere m na azịza ya bụ dabere.
Ọ dabere na ihe ịchọrọ inweta na ọ dabere na oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mba ahụ. Tụle nke a bụ mkpebi gị. Agala m Japan ugboro ise ma nwanne m nwanyị na-agwa m mgbe niile na Tokyo na-eche a graaannn ala ọma jijiji. M na-aga otu ihe ahụ. M gafere mkpịsị aka m, kpachara anya ma mee onwe m obi ụtọ. Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt » Egypt na umuaka